IStmitz Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
Lithini Igama Lokugqibela iSchmitz?
Inqampu iSchmitz yipeniso yomsebenzi "ngomsizi" okanye "umenzi wesinyithi," kwigama lesiJalimane elithi schmied okanye iDenmark yadibana . Kwamanye amaxesha kwakusetyenziswe njengefomonymic yeSmidt, elithetha "unyana kaSchmidt." Jonga kwakhona iiSmnmT kunye noSimith .
I-SCHMITZ yiyesi- 24 esona siqhelo .
Igama Igama: IsiJamani , isiDanish
Igama elinguNgcaciso : I- SCHMID, SCHMITT, SCHMIDT
Abantu abaPhezulu abaneSurname SCHMITZ:
UJames Henry Schmitz - umbhali wenzululwazi waseMelika
UJupp Schmitz - umculi waseJamani kunye nomculo wokuzonwabisa
UBruno Schmitz - isakhiwo seJamani
UJohnnes Andreas Schmitz - udokotela wase-Dutch wenkulungwane ye-17
E. Robert Schmitz - umculi kunye nomqambi wasePrano-American
ULeonhard Schmitz - Umfundi we-classical scholar nootitshala
Uphi igama likaS SCHMITZ Igama eliqhelekileyo?
I-SCHMITZ ifani namhlanje ixhaphake kakhulu eJamani, ngokusasazwa kwebheno kwi-Forebears, apho ihamba ngegama le-25. Ngokuqhelekileyo kuxhomekeke kwipesenti yabantu, nangona kunjalo, kwilizwe elincinane laseLuxembourg, apho liyi-6 eliqhelekileyo igama lokugqibela.
Ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler, iSmitmit ixhaphake kakhulu kwilizwe laseLuxembourg, ngokukodwa kwiDeekirch. Kukho ngokukodwa ngokuqhelekileyo kwimimandla yase-Nordrhein-Westfalen neRheinland-Pfalz yaseJamani. Iimpawu zamagama ezivela kwi-Verwandt.de nazo zibonisa ukuba uSmitmit uqheleke kakhulu entshona kweJamani, kwiindawo ezifana neCologne, eRhein-Seig-Kreis, eRhein-Erft-Kreis, eRhein-Kreis Neuss, Euskirchen, eDüren, eAachen, eVersen, eMönchengladbach naseDüsseldorf .
Iimithombo zeGenealogy kwi-Surname SCHMITZ
Amagama Amagama aseJamani - iZiselo kunye neMvelaphi
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lokugqibela lesiJamani kunye nesi sikhokelo kwimvelaphi yegama lesiJamani kunye neentsingiselo zamagama angama-50 aqhelekileyo aseJamani.
I-Schmitz Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengokwintsapho yaseSchmitz okanye isambatho seengalo kwiSenner.
Abantu abangaphezulu kwama-2,400 abanamagama-kaSmith-kuquka ukuhluka okufana noSmimtt, uSmyt, uSmidt noSchmitz-baye bajoyina le projekti yeDNA ukusebenzisa iDNA ngokudibanisa nophando lozalo ukuze kuhlulwe amaqela angama-220 ahlukeneyo kaSmith.
ISmitmit Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba weSernmitz ifani ukuze ufumane abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye uthumele umbuzo wakho weSmmitz.
I-FamilySearch - SCHMITZ Genealogy
Phonononga ngaphezu kwezigidi ezi-5.5 iziphumo ezivela kwiirekhodi zembali kunye neentlobo zentsapho ezixhaswe kumgca ezinxulumene nomnxeba weSchmitz kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-SCHMITZ Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweeNtsapho
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhalwa ngabangcwaningi beStmitz.
DistantCousin.com - SCHMITZ Umlando woBantu kunye neNtsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Schmitz.
I-GeneaNet - iStmitz Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abaneSname Schmitz, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
IStmitz Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanobumba beSchmitz kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
I-National League Rookies Yonyaka
Ubume benkcazo ka Alice Munro 'Ixesha leTurkey'
Intlanzi ye-Swimmer - Ingqwalasela yabanqabileyo abaNobunzima
Uyilo lweKharityhulam: Inkcazo, Injongo kunye neNdidi
Pow () I-PHP Umsebenzi
Iindawo ezibi kakhulu kwiMhlaba
I-Avoir ine-faim ye-loup
UNC Wilmington GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iinqununu Ezilishumi zeenkolelo zeNkolo yamaSikh
Cinga iDragons: Ukusuka eLas Vegas Indie Band ukuya kwi-Superstars yehlabathi lonke
Februwarius - Inyanga kaFebhuwari kwiKhalenda yaseRoma